တရုတ်နှစ်ဆအစိတ်အပိုင်းရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Hongyuan
Biogo TM အလိုအလျောက် ကို double-အစိတ်အပိုင်းရေစိုခံတာအပေါ်ယံပိုင်းရေစိုခံပစ္စည်းများခိုင်မာအောင်ပိုင်, နှင့် Group မှတစ်ဦးက isocyanate Pre-ပေါ်လီမာ polyether နှင့် isocyanate အားဖြင့် polycondensated ရပ်စဲသည်အုပ်စု B က, အေးဂျင့်, thickened အေးဂျင့်များ, ခဲအေးဂျင့်နှင့် Filler ကုသ, ပလတ်စတစ်များရေးစပ်အရည်ရောင်စုံသည် IX Group မှ A နှင့် B အညီအမျှအဆိုပါရေစိုခံအလွှာဟာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှုနှုန်းနှင့်အဖြီးအဖြစ်, ရေစိုခံတဲ့အခန်းကဏ္ဍသော Cross-ချိတ်ဆက်နှင့်ပုံမှန်အပူချိန်မှာ solididying မှတဆင့်တစ်ဦး elasticity နှင့်ရော်ဘာကဲ့သို့သောအပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်း
ဌ Biogo TM အလိုအလျောက် ချောမွေ့စွာကို double-အစိတ်အပိုင်းရေစိုခံတာအပေါ်ယံပိုင်းပုံစံများ, မှီမရနိုင်သည်ကိုရေစိုခံအမြှေးပါးတည်းဟူသော elasticity ရေစိုခံအလွှာ solidifying ပေါင်းစပ်နှင့်စီမံကိန်း၏ရေစိုခံခြင်းနှင့် seeping ခုခံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ အထူးသဖြင့်အပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင် craking သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ substrate မှမြင့်မားသော elasticity နဲ့ elongated မြင့်မားအလိုက်အထိုက်နေတတ်ပါတယ်။
အလွှာနှင့်အတူဌခိုင်မြဲသော Bond, အပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင်လည်းနှောင်ကြိုးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကွန်ကရစ်, ကျွန်းသစ်, သတ္တုအိုးများနှင့်ကျောက်ဂွမ်းအခါရေယုံနှင့်အတူအစွန်းရောက် Bond အာဏာရှိပါတယ်။
ဌအဆင်ပြေလျှောက်လွှာ, polyurethane အပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင်အအေးမိ application ကိုရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်ပြီး, အဆိုပါရေစိုခံအလွှာပေါ်မှာလျှောက်လွှာများနှင့်တိုက်သည့်အခါမယ့်နှုန်းကိုအဖြစ်အုပ်စုတစု A နှင့် B ရောမွှေပါ။
ဌလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသာအာဏာနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်, အချိန်မှတပါး, ရေစိုခံ၏မူလသက်ရောက်မှုရောက်ရှိနိုင်သည့်အတွက်ကျိုးအစိတ်အပိုင်းများ, ထိန်းသိမ်းရန်။
ကျယ်ပြန့်ခေါင်မိုး, မြေအောက်ခန်း, ရေကူးကန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အရပ်ဘက်အဆောက်အဦးရေစိုခံအမြိုးမြိုးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု [စံ GB ကို / T19250-2003 စီရင်လော့]
အပြင်ဘက် / အတွင်းပိုင်းh≤၏အပူပိုင်းအချိန်
ကျိုး elongated% ≥
ရေ impermeability 0.3MPa, 30min
စိုစွတ်အခြေစိုက်စခန်း၏ Bond အစွမ်းသတ္တိကိုတစ်ဦးMPa≥
ဌအလွှာ, ထောင့်နှင့်အပြင်ဘက်ထောင့်အတွင်းမှအဘယ်သူမျှမသေး, မြို့ပတ်ရထားကို arc သို့မဖြစ်စေ, အတွင်းထောင့်ရဲ့အချင်းထက်ပိုမို 50mm နှင့်ပြင်ပ corder ဖြစ်သင့်ချောမွေ့ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်
ဌကျော်ကို 10 မီလီမီတာဖြစ်သင့်သ .;
ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်သောက်သုံးသော: application ကိုသောက်သုံးသောအညီ, အညီအမျှကျွန်တော်တို့ကို o ပတ်ပတ်လည်ဖော်စပ်။
ဌကိုးကားစရာသောက်သုံးသော; အပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင်သောက်သုံးသောထူ 1mm အခါ 1.3-1.5kg / စတုရမ်းမီတာအကြောင်းပါ။
အကြီးစားရေစိုခံပလီကေးရှင်းတစ်ခုရော်ဘာသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ခြစ်နှင့်အတူတူညီနေမှုရောထွေးအပေါ်ယံပိုင်း coating, အထူ onsistent ဖြစ်ပါသည်, ယေဘုယျအားဖြင့်သူက 2.0mm မှ 1.5mm ဖြစ်ပါတယ်,3မှ4ကြိမ်အတွက် brushed ရပါမည်, နောက်ဆုံးသောအချိန်နိန်ကုသနိန်ယင်း pervious ပြီးနောက်အမှုကိုပြုရပါမည် နှင့်ရုပ်ရှင်နှင့် ertical ဦးတည်ချက်မှာနိန်ဖြစ်လာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သီးခြားရုပ်ရှင်-ဖွဲ့စည်းအဖြစ်, မြေအောက်စီမံကိန်းကိုဘုတ်အဖွဲ့အဘို့, အပြင်ခံစားခဲ့ရအားဖြည့်ပစ္စည်းတစ်ခုအလွှာခင်းသင့်ပါတယ်
အပေါ်ယံပိုင်းအထူ: မြေအောက်စီမံကိန်းကိုထူရန်ယေဘုယျအားဖြင့် 1.5mm, 2.0mm မှ 1.2 ဖြစ်၏ အိမ်သာအထူမှ 1.5mm ထက်လျော့နည်းမျှမက, exposured ခေါင်မိုးဆောက်လုပ်ရေးထူ၏ရေစိုခံ multilayer ဖို့ ,, 1.2 ထက်လျော့နည်းမျှမက, တန်း၏ရေစိုခံတဦးတည်းအလွှာⅢရေစိုခံရန်, အထူ 2mm ထက်လျော့နည်းမျှမက,
ပြီးသွားအလွှာလျှောက်လွှာ: နောက်ဆုံးသောကာလ Brush ခဲသည်မဟုတ်ရှေ့တော်၌ထိုသန့်ရှင်းသဲလွင့်စေ။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအလွှာ: အအပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဒီဇိုင်းအဖြစ် insulator တွင်လည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပျသငျ့သညျ။
ဌ Diluent ရေနှင့်မထိပါဘူး, အရက်အက်ဆစ်, ထိုကဲ့သို့သောဆေးသုတ်ပိုမိုပါးလွှာအဖြစ် nitro diluent မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဌလေဝင်လေထွက်ရိက္ခာ, mo မီးထားပါ။
ဌမျက်နှာဖုံးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုမှုကိုဖွင့်ပါသောကြောင့် 40 မိနစ်အထိကိုအသုံးဖြစ်ရမည်;
ဆောက်လုပ်ရေး site ကိုအတွက်ကျိုးအပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင်ရှာတွေ့ဓါးခုတ်အတူကျိုးဖွင့်ပွဲပတ်ပတ်လည်ကိုတူး, ပြီးတော့အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ပြုပြင် waterproofing တိုက် အကယ်. ဌ
ဌသိုလှောင်မှုအဆိုပါအာမခံချက်ကာလခြောက်လဖြစ်ပါသည်, သိုလှောင်မှုအချိန်ထဲကအပေါ်ယံပိုင်း rechecking ပြီးနောက်အသုံးပြုရပါမည်
ယခင်: Removable Car Protection Liquid Spray Rubber Coating
နောက်တစ်ခု: မှတ်ပုံတင် rubbering အပေါ်ယံပိုင်း
ရေတပ်စခန်း Polyurethane waterproof Coating , Tpo ရေစိုခံအမြှေးပါး, acrylic waterproof Coating, Flexible Polymer အမျိုးအစား-ဘိလပ်မြေ waterproof Coating , Single-သက်တမ်းထပ်တိုးခေါင်မိုးအမြှေးပါး , ကွန်ကရစ်သည် Polyurethane Coating ,
Flexible Polymer အမျိုးအစား-ဘိလပ်မြေ waterproof Coating , Single-သက်တမ်းထပ်တိုးခေါင်မိုးအမြှေးပါး , ကွန်ကရစ်သည် Polyurethane Coating , Tpo ရေစိုခံအမြှေးပါး, ရေတပ်စခန်း Polyurethane waterproof Coating , acrylic waterproof Coating,